Kiev - caasimada Ukraine. magaalada ugu weyn ee Ukraine. Warbixin ku saabsan Kiev
Kiev waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waa weyn Europe. Waa caasimada ah cammiran ee madax bannaan Ukraine, ay maamulka, dhaqaale, sayniska, xarunta dhaqanka iyo waxbarashada. magaaladan waxaa muuqaal dabiici ah iyadoo dadweynaha ee ka badan 3 milyan oo qof waxa uu ku yaalaa on xeebaha River Dnepr ah.
Kiev oo ah magaalomadaxda reer taxadiri taariikh iyo dhaqan qiimo, magaalo ka mid ah dhacdooyinka weyn iyo dadka aad u fiican. Qof kasta waxaa ka heli doontaa wax si gaar ah oo xiiso leh nafsaddiisa.
The farshaxanka iyo naqshadaha ee Kiev waxaa loo tixgeliyaa khasnadaha dunida. fanaaniin badan oo caan ah, gabayaaga iyo qorayaasha lagu qiyaasay quruxda gaarka ah ee magaalada this. The dalka durkiya ugu caan ka mid ah: Cathedral ee St. Sophia la mosaics fiican iyo frescoes dib shukaansi in qarnigii 11-; Kievo-Percherskaya Lavra soo bandhigtay dhowr Macaabidda Yuhuud iyo cathedrals; Golden Gate ee Kiev, oo taariikhda dib u 1037; Yukreeniyaan Baroque Church of St. Andrew; Cathedral 19-qarnigii weyn ee St. Vladimir; iyo soo jiidashada badan oo kale. Kiev waxaa badanaa loo yaqaan “hooyada oo magaalooyinka oo dhan” by Russia iyo Ukraine. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn ee Europe. In xarunta taariikhiga ah ee Kiev waxa aad dareemi kartaa ruuxa la soo dhaafay meel kasta.
Kiev waxaa kala duwanaayeen ay nolosha dhaqanka hodanka ah. Tiyaatarka ku caashaqay ka heli doontaa tiyaatarada badan oo bixiya barnaamijyo kala duwan masrixiyada. qaab intooda badan waxaa lagu qabtay Yukreeniyaan ama Ruush. Ayaa dhawaan dayac tiray Kiev Opera House bandhigaysaa opera aad u wanaagsan sidoo kale qaataan ballaaran oo ballets. Ivan Franko Tiyaatarka waa xarunta ah riwaayadaha Ukraine, comedy, iyo musicals. Dad badan oo bandhigyo kala duwan oo la fuliyaa ee matxafyada badan magaalada iyo meelo lagu daawado farshaxanka.
Kiev sidoo kale waa xarunta cilmi iyo waxbarasho ee madax bannaan Ukraine. Jaamacadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin tacliinta sayniska caanka Kiev-Mogilyanskaya Academy, taas oo ah mid ka mid ah goobaha cilmiyeed ugu horeysay ee Yurubta Bari, waxaa halkaas ku yaalla.
In ka magaalada ugu weyn ee Ukraine, Kiev waa a keentay warshadaha iyo xarunta ganacsiga ee dalka. warshadaha waaweyn ee Kiev waxaa ka mid ah: cuntada- (gaar ahaan processing oo sonkor ah dabocase), metallurgy, soo saaridda of mishiino, qalabka mashiinka, stock rogid, kiimikada, qalabka dhismaha, iyo dharka. Horumarinta dhaqaalaha Yukreeniyaan maayad siiyey dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah xarumaha cusub ee xafiiska, bangiyada, xarumaha bandhig ganacsi iyo shirkado kale oo ganacsi muuqday magaalada maalmahan.
Qaado socod iyada oo jidadka qadiimiga ah ee magaalada this muuqaal dabiici ah, dareemaan quruxdiisa iyo ruuxa ay la soo dhaafay gaar ah. Waxaa hubaal ah in aad joogtid Kiev mid ka mid ah waayo-aragnimada aad ugu xusuusta badnaa noqon doonaa.
Goobta: 827 sq km
Location: gobolka Kievan, on Dnepr Webiga
wadataa Geographic: 50 28 N, 30 29 E
Population: 2,900,000 (2001 waa.)
Cimilada: qoraxda Continental. Waxaa inta badan lagu gartaa roobab barwaaqo iyo cloudiness ee xilliga qaboobaha iyo dayrta. Winters badanaa dheer iyo qabow. Summers waa gaaban, laakiin wuxuu noqon karaa mid soo jiidasho leh kulul.
UTC / GMT mowjadda: UTC / GMT + 2 saacadood
code Area: 44
jiidashada Major: St. Sophia ee Cathedral, Uspensky Cathedral, St. Michael keniisad, Kievo-Pecherskaya Lavra, Golden Gate, Andreyevsky Spusk.
warshadaha Major: Metallurgy, warshadaha injineernimada, kiimikada, dharka, cuntada-, qalabka dhismaha, waxyaabaha korontada, gaaska, saliidda, dhuxusha iyo wax soo saarka Peat, warshadaha alwaaxa.
Last update:24 Laga yaabaa 19